स्वास्थ्य चौकिलाई उपलब्ध गराईएका ईसिजी मेसिन सञ्चालनमा गौरादह नगरपालीकाले चासो बढायो – सप्तरंगी एफ एम
Home / ट्रेन्डिङ्ग / स्वास्थ्य चौकिलाई उपलब्ध गराईएका ईसिजी मेसिन सञ्चालनमा गौरादह नगरपालीकाले चासो बढायो
सप्तरङ्गी एफ.एम. दमक/मंशिर ७/
झापको गौरादह नगरपालिले नगर भित्र रहेका तिन वटा स्वास्थ्य चौकीमा उपलब्ध गराएको ई.सि.जि. मेसिन सञ्चालन गर्न जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव भएपछि पुर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याउन नगरपालीकाले चासो देखाएको छ । नगरबासीले आफ्नै ठाउँमा उन्नत प्रकारको स्वास्थ्य सेवा पाउन भन्ने उद्देस्यले नगरपालीकाले गत असार महिनामा नगर भित्रका तिनवटा स्वाथ्य चौकीलाई ई.सि.जि. मेसिन उपलब्ध गराएको थियो । तर पाँच महिना बित्दा पनि सञ्चालनमा समस्या भए पछि नगरपालीकाले चासो देखाएको हो ।
गौरादह नगरपालिकाले नगर भित्रका स्वास्थ्य चौकीहरु मध्ये गौरादह, कोहवरा र बैगुन्धुरा स्वास्थ्य चौकीमा गत असार महिनामा ई.सि.जी. मेसिन उपलब्ध गराएको थियो । तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको अभावमा मेसिन थन्किएको कोहबरा स्वास्थ्य चौकी प्रमुख राम कृष्ण जोसीले बताउनु भयो । उता बैगुन्धुरा स्वास्थ्य चौकीमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी भए पनि ई.सि.जी. मेसिनमा लाग्ने कागजको अभाव भएपछि मेसिन थन्किएको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख धिरेन्द्र सुब्बाले बताउँनु भयो । त्यसैगरी गौरादह १ मा रहेको स्वास्थ्यचौकीमा ई.सि.जी. मेसिन सञ्चालनमा आए पनि पछिल्लो समय मेसिनको लागी आवस्यक पर्ने सामाग्रीको अभाव भएको स्वास्थ्यकर्मी सुरेन्द्र बस्नेतले बताउँनु भयो । अहिले सम्म १५ जनाले सेवा लिईसकेकाले मेसिनका लागी आवश्यक पर्ने कागज खरिद गर्न नगरपालिका संग अनुरोध गरेको बताउनु भयो ।
ई.सि.जी. मेसिनको लागी आवस्यक पर्ने सामाग्री खरिद र नगरबासीलाई दिईने सेवा सुविधा प्रती नगरपालिका सकारात्मक रहेको नगर प्रमुख रोहित कुमार साहले बताउनु भयो । नरबासीलाई सेवा दिनकै लागी ई.सि.जि. मेसिन उपलब्ध गराएकोले केहिदिन भित्रमै त्यसको सेवा सुचारु गर्ने उहाँले बताउनु भयो । ई.सि.जि. मेसिन सञ्चालनको लागी स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आवस्यक तालिम दिई सकेकाले चाँडै सञ्चालनमा आउने र नगरबासीले सेवा पाउने गौरादह नगर स्वास्थ्य संयोजक पर्शुराम भट्टराईले बताउनु भयो ।
Previous: नगरपालीकाले कार्यबिधि नबनाउँदा दमक बसपार्कमा निर्माण गरिएको अपाङ्गमैत्री आधुनिक टर्मिनल भवन निर्माण सम्पन्न भएको दुई बर्ष पुग्दा पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेन
Next: दमक ९ पुर्वेली टोलमा सडक निर्माण उपभोक्ता समिति गठन